Igumbi le-Casa Gaviota #1 - I-Airbnb
Igumbi le-Casa Gaviota #1
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Christhian
U-Christhian Ungumbungazi ovelele
Itholakala endaweni lapho kuhamba khona abantu abaningi, futhi iseduze kakhulu nezindawo zokudlela kanye nolwandle, le ndawo yakhiwe enamagumbi angasese, imizuzu emi-2 kuphela ukusuka ogwini kanye nemizuzu eyi-15 uhamba ngezinyawo usuka ePunta Cometa.
Ungathola izitolo eziningi zokudla namabha, kanye nezithuthi zomphakathi, ngakho-ke kukhona amahora wokuphithizela nomculo, kodwa uma sekuyisikhathi sokulala, ungajabulela umoya ohelezayo kanye nomculo omnandi wolwandle, kanye nokucula kwezinyoni. kanye namakhilikithi.
Indlu inezitezi ezimbili, iqedwe ngezitini ezibomvu nokhuni. Esitezi sokuqala kunamakamelo amathathu anendlu yokugezela yangasese, amabhentshi ekhabethe lezingubo, inetha lomiyane kanye nefeni, amakamelo amabili okuqala, anombhede ophindwe kabili, owesithathu unemibhede emibili eyodwa ngendlela ye-bunk. Endaweni evamile uzothola igumbi lokudlela, i-hammock kanye nesiteshi sesevisi esinamanzi okuphuza, umenzi wekhofi, nezitsha.
Esitezi sesibili sinendlu encane enegumbi lokuphumula, igumbi lokudlela kanye ne-hammock, igumbi elinombhede olingana nenkosi, ikhabethe lezingubo, ifeni kanye nenethi lomiyane; indlu yokugezela yabelwa umuntu
4.87 · 126 okushiwo abanye
Indawo esikuyo iyingxenye yomhlume futhi iyinhliziyo ye-Mazunte, lapho iningi lezokuvakasha nezohwebo ligxile khona. Ekuseni kuthulekile futhi ungezwa amagagasi olwandle nezinyoni eziningi zinkenketha; kusukela emini bebade kuzoba nokunyakaza okuthe xaxa kanye nezimoto, ezinye izindawo zokudlela ziqala ngomculo, ebusuku ukunyakaza, kanye nomsindo ushubile, kodwa uma sekuyisikhathi sokulala, ukuzola nokuhleba kolwandle kuyabuya!
Sifuna uzizwe ukhululekile njengasekhaya, ngakho sikunikeza indawo eyanele ukuze ujabulele indawo; noma kunjalo, siyaxhumana futhi siyaqaphela noma yisiphi isidingo ngomakhalekhukhwini;Sizimisele ukusiza nokuxoxa, noma nini lapho izivakashi zikufisa!
Sifuna uzizwe ukhululekile njengasekhaya, ngakho sikunikeza indawo eyanele ukuze ujabulele indawo; noma kunjalo, siyaxhumana futhi siyaqaphela noma yisiphi isidingo ngomakhalekhukh…
UChristhian Ungumbungazi ovelele